Ikhaya elikufutshane neConcord Hospital, iivenkile, ibhasi, iivenkile zokutyela - I-Airbnb
Ikhaya elikufutshane neConcord Hospital, iivenkile, ibhasi, iivenkile zokutyela
Ukuhamba nje imizuzu emi-2 ukuya kwiSibhedlele saseConcord lelona khaya lihle kwaye lilikhulu lomlinganiswa limiselwe ukuthuthuzela kunye nolonwabo njengoko usebenzisa zonke iindawo eziqhelekileyo kunye neendawo. Sinamagumbi amabini athandekayo okuphumla, iipatiyo ezimbini ezahlukeneyo, ikhitshi langoku elixhotyiswe kakuhle ligcwele zombini ii-hotplates zegesi kunye nombane, i-dishwasher, i-microwave kunye nazo zonke izixhobo, iimbiza kunye neepani kunye nempahla esebenza ngokupheleleyo. Sine-Weber barbecue enkulu yokuyonwabela ngelixa sidada kwidama lethu
Amagumbi okulala anesitayile, athambile kwaye akhululekile
Le ndlu ikwisitrato esinoxolo esithe cwaka esijikeleze ikona ukusuka kwiibhasi ukuya kwipaki yeOlimpiki, eRhodes, eSydney City kunye nakwiZikhululo zikaloliwe zaseKhaya.
Isitalato esihle esithe cwaka kwaye kude kube yimizuzu ekude kwiivenkile, iindawo zokutyela ezinkulu, iindawo zokuthenga ezinkulu ezinje ngeMacquarie kunye neRhodes kunye namaziko e-byusiness kunye ne-Olymppic Park. Ukuba usebenza kwiSibhedlele saseConcord, okanye ukuba usisigulana selungu losapho, awunakufumana indawo egqibeleleyo, ukulahlwa kwamatye.
Ndihlala kule dilesi kodwa ukuba ndingekho ndingafowunelwa ngokulula nge-air bnb okanye ndinetshomi ehlala apha ngokusisigxina kwaye iyafumaneka ukuze ikuncede xa ufuna nantoni na. Ndiyazingca ngendlu ecocekileyo necocekileyo nangona ndinamagumbi amabini eendwendwe zomoya ze-Bnb, kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo, ngoko andinakuhlala ndiqinisekisa ukuba indawo iya kuhlala icocekile ngexesha lokuhlala kweendwendwe.
Isidlo sakusasa ngokutya okuziinkozo, ukutya okuthotyiweyo kunye nokusasazwa, iti kunye nekofu ziya kufumaneka ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho kunye neemfuno ezisisiseko zokuhlambela zeshampu, isilungisi, isepha kunye nephepha langasese. Iziqholo kunye neoyile ziya kufumaneka ukuba uzisebenzise ukunceda ukupheka lula kuwe
I-Wifi iyafumaneka njengeNetflix
Ndihlala kule dilesi kodwa ukuba ndingekho ndingafowunelwa ngokulula nge-air bnb okanye ndinetshomi ehlala apha ngokusisigxina kwaye iyafumaneka ukuze ikuncede xa ufuna nantoni na.…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-23475